China 2019 nyowani chigadzirwa inopisa-kutengesa epurasitiki kupeta chena mativi tafura Mugadziri uye mutengesi | Jianye
2019 nyowani chigadzirwa inopisa-kutengesa epurasitiki kupeta chena mativi tafura
HDPE tafura yepamusoro:
20000000 Piece / Pieces pamwedzi
Chinhu icho Kwete.
TT KANA LC
Φ25 KANA Φ19 * 1.0MM
1PC / Pe bhegi & CTN
MAZUVA 30 PASHURE KURIPA
pasuru: Tafura imwe mune rimwe bhegi re PE uyezve mune 3-yakaturikidzana brown brown katoni
Shaoxing Jiangye zvigadzirwa zvekunze kunze. Iyo inongova 50KM chete kubva kuNingbo Port, uye 200KM kubva kuShanghai Port, uko inonakidzwa nekuwana nyore kwekutaurirana.Iyo kambani yatowana zvigadzirwa zvepamusoro-soro, senge komputa flan mutungamiriri wepurasitiki yekurova muchina kubva 500g kusvika 15000g, kumonyanisa muchina uye kugadzira muchina. Zvigadzirwa zvikuru muHongye matafura, zvigaro nemabhenji emukati nekunze, ayo anogamuchirwa nevatengi vese pasirese.
6 tsoka epurasitiki yekupeta bhenji pamwe nekuchengetedza kukiya
tsika 6ft epurasitiki yepamusoro magumo inotakurika diki mult ...
6ft HDPE chechi chena rectangular inopisa inotengeswa chikamu ...
8ft 8 '244cm Buffet Tafura YeDoro Pon ...
2015 inopisa inopisa 5ft epurasitiki Kumbofungatira kumativi mabiko ...
Anotakurika asiri pitikoti mufashoni kufamba lightweigh ...